Hong Kong Wine & Dine Festival na-ekpughe Ntanye nke 34 Ahụmahụ Gastronomic
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong » Hong Kong Wine & Dine Festival na-ekpughe Ntanye nke 34 Ahụmahụ Gastronomic
culinary • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Hong Kong Wine & Dine Ememme
Mmụba ime mmụọ nke Hong Kong na ịhụnanya nke ndụ amabeghị mmiri n'ụzọ ọ bụla site n'ọrịa ahụ, nke a na-egosi na mmepụta nke Hong Kong Wine & Dine Festival nke ga-amalite site na Nọvemba 11 ruo Disemba 15, 2020.
Nọmalị ihe omume dị n'ime mmadụ, dị ka ọtụtụ ihe mere n'oge gara aga na gburugburu ụwa, Hong Kong Wine & Dine Festival, nke ndị Hong Kong Tourism Board (HKTB) haziri, nwere ihe okike iji mee atụmatụ ịga n'ihu na "ịntanetị + na-anọghị n'ịntanetị" Ọkpụkpọ maka oge mbụ. Nke a ga - enye ndị na - ege ntị n’ụlọ na mba ofesi ọhụụ ọhụrụ gastronomic nke ejikọtaghị oge na nsogbu ala.
Ememme a ga-enye ahụmịhe na-akpali akpali n'ịntanetị, gụnyere Online Wine Cellar na-egosipụta ụdị dị iche iche na-adịghị ahụkebe na onyinye pụrụ iche, na isi nri na-atọ ụtọ na ị masterụ mmanya na-egbu egbu na ntanetị na ntanetị. A ga-enwe klas-tinyere klas na ndụ ngosi si Michelin-starred chefs, wine tastings with renowned sommeliers, beer pairing with local brewers, and more.
Onye isi oche HKTB, Dr. YK Pang kọwara usoro a: “Ememe Wine & Dine nke Hong Kong bụ otu n’ime ihe omume kachasị ewu ewu n’etiti ndị obodo na ndị njem nleta kemgbe ọ malitere afọ iri gara aga. N'agbanyeghi ntiwapụ nke COVID-19 n'afọ a, anyị nwere olile anya na ndị mmadụ nwere ike ịga n'ihu na-anụ ụtọ ọdịbendị nri pụrụ iche na Hong Kong ebe ha na-enye ohere azụmaahịa maka mpaghara F & B mpaghara dị n'etiti ọnọdụ akụ na ụba a siri ike. Hazi ememme a ga - enyere anyị aka imezu ebumnobi abụọ ahụ n’emebighị ahụike na nchekwa ọha. ”
Vicky Cheng nke VEA Restaurant & Lounge
Adaba Online Masterclasses
Maka ndị na-ege ntị na ụwa, isi ihe omume a bụ usoro dị iche iche nke ntanetị 34 dị n'ịntanetị nke ndị na-ekiri nwere ike ịnụ ụtọ maka ụgwọ. Masterclasses ga - adị ndụ WineDineFestival.DiscoverHongKong.com maka Satọde na Sọnde atọ na-esote site na November 21 ruo December 6 wee wepụta maka nlele na-achọ. Ha na-ekpuchi otutu okwu site na mmanya na ihe ndi mmuo di nma iri nri di nma, na aru nri. Ahụmịhe na-adịghị n'ịntanetị maka ndị ahịa mpaghara gụnyere azụmahịa pụrụ iche na mmemme gastronomic nke ọtụtụ narị ebe iri nri gafere Hong Kong iji nwee ọ enjoyụ.
Shane Osborn nke Arcane na Nkume
Soro Klaasị Cook-tinyere
Maka ezigbo ụtọ nke Hong Kong, ndị isi ụlọ nwere ike ibi ndụ ọtụtụ klaasị na klaasị wee gbasaa akwụkwọ nri iche iche. Executive Chef Adam Wong nke ụlọ oriri na ọ Forumụ Forumụ Forum ga-agwa ndị na-ekiri ya otu esi eme osikapa eghere eghe Ah Yat eghe osikapa nke ahụ agaghị agbaghara. Maka ndị na-achọ imeziwanye nri ha na-eri nri na kichin, ngosipụta ndụ site na ndị isi Hong Kong a na-eme ememme dịka Michene abụọ a gbara ama ama Shane Osborn nke Arcane na Cornerstone na Vicky Cheng nke VEA Restaurant & Lounge bụ ohere dị ukwuu ilele ma mụta ọhụụ Atụmatụ na usoro.
James Suckling, onye na-akatọ mba niile
Ka anyị kwuo gbasara mmanya
Oenophiles na ndị hụrụ mmanya n'anya n'otu n'otu nwere ike ịnụ okwu mmanya site na Hong Kong, onye a na-akatọ mba ụwa James Suckling na Master of Wine Debra Meiburg, ndị ga-ekerịta ndụmọdụ na isiokwu "New Wave Bordeaux" na "Pacific West" n'otu n'otu . Ckụ ara ga-ewebata karama mmanya atọ dị ọnụ ala site na Bordeaux.
Suckling kwuru, "Hong Kong bụ otu n'ime obodo mmanya kacha mma n'ụwa, ogo n'ọkwa dịka London na New York. “Hong Kong ka bụkwa ahịa mbụ na mbupụ Bordeaux mmanya. Ememe nke afọ a ga-erute ọtụtụ mmadụ gburugburu ụwa, m na-atụkwa anya ya. ”
Shirley Kwok, onye guzobere ebe a na-eme bred The Cakery
Chịkọta Gburugburu, iesmụ Nwaanyị!
A na-egosipụta usoro nwanyị niile na Nọvemba 28. Okwu Nwanyị Na-ekwu Okwu, ndị na-eme ihe ike ise na-eme ka nri na ihe ọ Hongụ willụ Hong Kong ga-anabata onye ọ bụla iji kesaa ihe pụrụ iche na nka ha. Shirley Kwok, onye guzobere ebe a na-eme achịcha bekee The Cakery, ga-eduga klas ndị na-esi nri nke ndị na-ekiri ha nwere ike ịme vegan ha na Apple Pie na-enweghị shuga. Onye isi nri Cheick Vicky Lau nke TATE Dining Room ga - eduga ndị na - ekiri ihe ngosi site na ngosipụta dị ndụ maka otu esi eme Egg Crispy with Efere Ero. Onye nyere aka na-eche Jamie Lo, Asia-Pacific nke ọdụdụ Master nke Wine Sarah Heller, na onye na-eme ihe nkiri Bernice Liu ga-eme ka ndị sonyere site na ịnụ ụtọ ha, champeenu, na mmanya n'otu n'otu.
Vicky Lau, Onye isi nri nke TATE Dining Room
Nka na Okike = Ememe Ememme
"Agbanyeghi na emeela ihe omume HKTB nke amachibidoro nwa oge, anyị na-eji amamihe na akụrụngwa anyị ebuli iji bulie nkwalite megide ọnọdụ ọrịa na-efe efe," Onye isi oche HKTB kwuru, Dr. Pang. “Ọ bụ ya mere anyị ji kpebie ịmaliteghachi ihe omume nke ihe omume mega ma nakweere usoro 'online + offline' ọhụrụ maka ememme Wine & Dine Hong Kong 2020. Ọ bụ ọhụụ ọhụrụ emere maka ọhụụ ọhụrụ nke anyi huru onwe anyi na ya. HKTB na-eme nke a iji hụ na ndị mmadụ nwere ike isonye na mmemme a kwa afọ n'agbanyeghị ọrịa a na-efe efe ma nyere ndị ahịa anyị nwere nsogbu aka ịkwalite ngwaahịa ha ma mepee ohere azụmaahịa ọhụrụ n'oge ndị a siri ike.
“Ebumnuche anyị bụ ka anyị gaa n’ihu na-enye akụ na ụba Hong Kong nkwado ma zipụ ozi ziri ezi nye ụwa na mmụọ Hong Kong nwere ike ime na ịhụnanya nke ndụ emebibeghị n’ụzọ ọ bụla site n’ọrịa ahụ, na anyị nwere ike iji ihe ohuru ohuru anyi iji mee ihe omume anyi mgbe anyị na-akwado ịnabata ndị ọbịa na obodo anyị, ”Dr. Pang kwukwara.
Emere Hong Kong Wine & Dine Festival na 2009, mgbe Hong Kong na Bordeaux bịanyere aka na Memorandum of Understanding na Nkwado na Ahịa metụtara Wine. Nnukwu ihe omume a na-eme n'èzí ghọrọ ngwa ngwa nke obodo ahụ ma bụrụ nke a kpọrọ aha otu n'ime mmemme iri na elu ụwa na mmanya nke Forbes Traveler.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Hong Kong Wine & Dine Festival 2020 na mmemme zuru oke nke masterclasses n'ịntanetị, biko gaa WineDineFestival.DiscoverHongKong.com
Maka ozi ndị ọzọ na a oge nke Masterclasses Online, pịa ebe a.